Raphael Varane oo saakay seegay Tababarkii Real Madrid xilli lagu wado in Manchester United ay dhammaystiro saxiixa xiddigan saacadaha soo socda – Gool FM
(Manchester) 26 Luulyo 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay saacadaha soo aaddan dhammaystirayso heshiiska ay kula wareegeyso Raphael Varane.
Shabakadda ciyaaraha ee Manchester Evening News ayaa goordhow daabacday in Man United ay heshiiska Varane dhammaystiri doono saacadaha yar ee soo aaddan.
Weli waxaa jira shaqooyin badan oo ku aaddan in ay Man United dhammaystiro saxiixa Raphael Varane, laakiin warbixintaan ay goordhow sii deysay Manchester Evening News ayaa sheegeysa in kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford ay dhammaystiri karto saxiixiisa saacadaha soo socda.
Subaxnimadii hore ee Saaka ayaa wararka laga helay dalka Spain waxa ay soo jeediyeen in Raphael Varane uusan soo xaadirin Tababaraha Kooxda Real Madrid, inkastoo haatan la aaminsan yahay inay arrintaasi run u eg tahay oo lagu wado in saacadaha soo aaddanba uu ku biiro Man United.
Wixii warar ah ee ku soo kordha saxiixa Varane ee kooxda Man United waxaa kula socon doontaan wararkeenna soo aaddan.